Faahfaahin: Dagaal xooggan oo ka dhacay duuleedka Dhuusamareeb | KEYDMEDIA ONLINE
Faahfaahin: Dagaal xooggan oo ka dhacay duuleedka Dhuusamareeb
Dagaal xooggan ayaa saaka Ciidmada xoogga dalka iyo Kooxda Al-Shabaab ku dhex maray inta u dhaxeeya magaalooyinka Guriceel iyo Dhuusamareeb oo dhaca gobolka Galgaduud ee bartamaha Soomaliya.
Dhuusamareeb, Soomaaliya - Dagaal u dhaxeeya Kooxda Al-Shabaab iyo Ciidamada xoogga dalka, gaar ahaan, qaybta 21-aad ayaa saaka ka dhacay inta u dhaxeysa degaannada la yiraahdo Tuula-xaayow iyo Ceel-dheere oo dhanka qorrax u dhaca ka xiga Dhuusamareeb.
Wararka ka imaanaya Galgaduud ayaa sheegaya, in dagalku uu saaka xilli hore ka qarxay, wadada dheer ee isku xirta Magaalooyinka Guriceel iyo Dhuusamareeb, kadib markii ciidamada qaybta 21-aad ka war heleen in ciidamo ka tirsan Al-Shabaab soo galeen degaanka.
War ka soo baxay Dowladda ayaa lagu sheegay in dagaalka, Al-Shabaab looga dilay in ka badan 15 dagaallame, lagana hor tagay howlo miino galin oo ay ka wadeen waddada, sawirrada maydadka Al-Shabaab, ayaana lagu soo bandhigay dhegaanka lagu dagaalamay.
Tan iyo markii xukuumaddii Xasan Cali Kheyre, ay meesha ka saartay Maamulkii Ahlu Sunna Waljamaacah, waxaa degaanka dib ugu labtay Al-Shabaab oo laga xoreeyay 12 sano ka hor, taas oo sababtay inuu yaraado isku socodka magalooyinka Guriceel iyo Dhuusamareb.
Maalin ka hor ayay ahayd markii Al-Shabaab ay dagaal la'aan kula wareegeen degaanka Af-cagaag oo hoos tagay Guriceel, halka todobaadkii la soo dhaafay markii uigu horreysay lagu arkay degaanka Dabarre oo qiyaastii 30KM degmada.
Guud ahaan degaannada Maamulka Galmudug ayaa la dhibaatoonaya amni darrada ay maleegayaan Al-Shabab, mana jiro qorshe muuqda oo nidaamka Qoorqoor, wax uga qabanayo amni xumada sii kordheysa.